Nke a bụ ihe ngosi mmeghe ihu ọhụrụ Pixel 4 | Androidsis
Nke a bụ mmeghe ihu na ntọala igwefoto ọhụrụ nke Google Pixel 4
Ya enwere ọtụtụ "ndị ọrụ" ndị na-ejide Pixel 4 ha na-ekwukwa uche ha iji gosi ka esi akpọghe ihu na ntọala igwefoto ọhụrụ nke ọrụ ekwentị Google a.
Okwu dị ịtụnanya na ekwentị a eruola ụfọdụ "ndị ọrụ" na blọọgụ na mgbasa ozi kachasị ewu ewu na ha enweghị ya. Site na Vietnam na-abịakwute anyị echiche ọzọ nwere ọtụtụ onyogho na otu n’ime ha bụ ịkpọghe ihu nke ekwentị Google ọhụụ ga - abịa.
Otu n'ime nkọwa nke onye ọrụ a aha ya bụ Genk na-enye, bụ nke ahụ ụdị ọcha ahụ nwere ọdịdị na-enweghị atụ na nke ahụ dị anya site na nke na-enwu gbaa nke a hụburu na nkwụsị. Ọ bụ ezie na ihe kachasị adọrọ mmasị sitere na igwefoto.
Anyị nwere ike ịhụ ihe ọ ga-abụ interface ọhụrụ ntọala mgbe ị na-ese foto, kama akara ngosi ndị ahụ maka ọkụ ọkụ, ngụ oge na ọnụọgụ dị elu. Ndị a nọ n'etiti ihuenyo dị ka "egosipụtara oke."
Isi ihe ndị a hụrụ bụ ihe ga - abụ ntọala ọhụụ dị elu nke ahụ -enye gị ohere ịzọpụta selfie dị ka a ga-ọ bụ preview na-enweghị ịgbanwe agbanwe nghazi nke mobile. O yiri ka ọ dị anyị n'anya, mana ugbu a, na Pixel, nghazi dị ka "enyo", ebe foto echekwara na-agbanwegharị iji gosipụta etu ezigbo onyonyo ahụ ga-adị. Ọbụna jiri ederede ederede.
Aboutkpọghe ihu? Ọfọn anyị nwere animation ọhụrụ mgbe akpọchi na-aga nke ọma. Ọ dịghị ihe ọ bụla na-atọ ụtọ, mana nke ahụ na-agbakwunye ahụmịhe onye ọrụ ka mma na ihe Google maara ọtụtụ ihe na nso nso a.
Anyị nwere Pixel ngosi ụbọchị na ugbu a foto ndị ọzọ na nkọwa ndị ahụ na-agba anyị ume ịmatakwu banyere ngwaọrụ a na-adọrọ mmasị nke ga-erughị otu ọnwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ mmeghe ihu na ntọala igwefoto ọhụrụ nke Google Pixel 4
Ngwa Ekwentị gị nke Microsoft maka Windows 10 na-agbakwunye akara batrị ma na-akwadebe maka oku mkpanaka
Nkọwapụta nke Galaxy M10s zuru ezu